रोवोट ओलम्पिक भनेको के हो ?
सन् २०२० मा विश्वभरिका रोबोटहरु भेलापारी जापानले आयोजना गर्न लागेको ओलम्पिक प्रतियोगितालार्इ रोवोट ओलम्पिक भनिन्छ । जापानी प्रधानमन्त्री Shinzo Abe को प्रमुख सक्रियतामा यो कार्यक्रमका लागि तयारी भैरहेको छ । विश्व प्रबिधि जगतमा रोबोटलाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोग गर्नका लागि यो एक कोशेढुंगा समेत हुने अपेक्षा गरिएको छ । रोबोटिक उत्पादनको हिसावले जापान अग्रणी मुलुक पनि हो । यसै सन्दर्भमा Shinzo Abe ले रोबोटिक क्रान्ति शुरु गर्नका लागि एक टास्क फोर्स निर्माण गरी अगाडी बढ्न उद्घोष समेत गरेका छन् । सन् २०२० को ग्रिष्मकालिन ओलम्पिक खेल समेत जापानमा नै हुँदैछ ।
1 युरो के हो ?
2 वनाक्राई ¥यानसमवेयर भनेको के हो ?
3 विदेशी लगानीकर्तालाई ५ वर्षे भिषा
4 सौर्य आँधी के हो
5 नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरु
7 चिकित्सकहरुको परामर्श शुल्क
9 संविधान, ऐन, नियममा फरक
10 मेट्रो ट्राफिक एफ एम शुरु